USA, 17 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Hadii aad u malaynaysay in Hindida keliya maydka gubaan, waxaa hadda sii badanaya dadka kale ee aan Hindida ahayn ee maydka guba.
Dalka Japan ayaa ugu horeeya wadamada maytidooda guba boqolkii qof uu ku dhinta Japan hal qof ayaa laga aasaa 99 kale waa la gubaa. Reer galbeedka ayaan iyaguna yareysan tusaale ahaan Denmark 76% dadka dhinta waa la gubaa, Sweden 70% ayaa la gubaa, Ingiriiskana 72% ayaa la gubaa. Maraykanka ayaa isna guba 40% dadka dhinta. Qiyaasahan oo dhamaantood la qaaday 2008 waxay ku tusuyaan sida ay aduunka ugu sii fidayso gubitaanka dadka dhinta.
Sababaha keenay inay sii korodho gubitaanka maydka ayaa waxa ugu weyn xaga dhaqaalaha. Dalka Ingiriiska waxaa ku baxa aasitaanka qofka lacag dhan 7 kun oo geni, halka ay gubitaanka ku baxdo wax ka yar 500 geni taas ayaana dad badan ku riixday inay qofkoodii dhintay gubaan. Dalka Maraykanka inkastoo qiimaha aasitaanka maydku kala duwan yihiin hadana celcelis ahaan waxaa maydka ku baxa 6000 doolar, halka gubitaanka la bixiyo 450 doolar.
Hadaan ka eegno dhinaca diimaha, diinta Islaamka oo keli ah ayaa si cad u diidey in maydka la gubo, halka Yuhuuda iyo Kiristaanku ku kala qaybsameen banaanida in maydka la gubi karo. Diinta Hinduuga iyadu waajib ayay ka dhigaysaa gubitaanka maydka.
Yaasiin Gacan-Jilib AlMakhzuumi